अख्तियारले सुरु गर्‍यो पशुपतिनाथको जलहरी खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन « Nagarik Khabar
अख्तियारले सुरु गर्‍यो पशुपतिनाथको जलहरी खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन
प्रकाशित मिति :9July, 2021 5:53 pm
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथको जलहरी खरिद प्रक्रियाबारे छानबिन शुरु गरेको छ । स्रोतका अनुसार विरोधका बीच पनि गत फागुन ११ गते पशुपतिमा राखिएको सुनको जलहरी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन शुरु गरेको हो ।
जलहरी खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले चासो देखाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले पनि स्वीकार गरेका छन् । डा. ढकालले यो दुई सरकारी कार्यालयबीचको नियमित प्रक्रिया रहेको भन्दै अनियमितताको आरोपमा छानबिन नगरेको बताए ।
कुनै पनि खरिद प्रक्रिया कसरी भयो भनेर बुझ्नु अनौठो विषय नरहेको ढकालको भनाई छ। ‘सुनको जलहरीको खरिद प्रक्रियाको बारेमा पनि अख्तियारले सामान्य सोधपुछ गरेको हो, उहाँहरुले त्यो खरिद प्रक्रिया कस्तो रहेछ भनेर चासो दिनुभएको हो ।’
फागुनमा राखेको सुनको जलहरीमा क्षति पुगेपछि रातारात मर्मत गर्न लागेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । स्थानीय नरोत्तम वैद्य पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कोषाध्यक्ष हुन् उनले हतारमा राखेको सुनको जलहरीमा क्षति पुग्दा मूलभट्टलाई क्षति समेत पुगेको भन्ने जानकारी आफूलाई आएको बताएका छन् ।
आफ्नो कमजोरी छोप्न कोषले कोभिडका कारण मन्दिर बन्द भएको बेला रातारात मर्मत गर्ने तयारी गरेको आरोप वैद्यले लगाए । कोषका सदस्य सचिव डा. ढकाल जलहरीमा क्षति भएको विषयमा सत्यता नरहेको बताउँछन् ।
डा. ढकाल भन्छन्, ‘बेरिएको जलहरीलाई सुनकै किलाले जोड्न बाँकी थियो, त्यसैलाई क्षति पुगेको भन्नु भएको होला । जलहरी च्यातिएको वा यसमा क्षति पुगेको कुरामा सत्यता छैन ।’